Xasan Daahir Aweys oo kasoo hadlay xabsi guriga “Itoobiya ayaa la wada raacay” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Sheekh Xasan Daahir Aweys oo xabis guri ugu jira dowladda Soomaaliya muddo sanad ku dhow ayaa hadal laga soo duubay loo qeybiyey warbaahinta, isagoo sheeegay inuu doonayo inuu farrin u gudbiyo dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dhallinyarada.
Xasan Daahir ayaa jeediyey war dheer, wuxuuna sheegay in dalka Soomaaliya uu ku jiro gumeysi, maamullada ka jira Soomaaliyana dhamaantood ay raacsan yihiin Itoobiya.
“Wadankii waa la heystaa, qof kasta wuu ogyahay, weliba cadowgii ugu weynaa ee Itoobiya ayaa heysta, hadda waatan dalka loo qeybiyey gobol gobol, gobol kastana Itoobiya ayuu ku xiran yahay” ayuu yiri Xasan Daahir.
“Puntland madaxweyniheedu Itoobiya ayuu ordaayaa, Somaliland sidoo kale sida Feysal Cali Waraabe sheegay, Jubaland waa sidoo kale, kuwa Muqdisho joogana waa la mid oo dhamaantood Itoobiya ayay ka talo qaataan, haddii ay is khilaafaanna iyada ayaa dhexdhexaadisa” ayuu sidoo kale yiri Xasan Daahir Aweys oo aan soo hadal qaadin qolada maamusha degmada uu kazoo jeedo ee Dhuusamreeb.
“Dadkii ayaa la kala qeybiyey, waxaa la leeyahay waa Isaaq dowlad, Majeerteen waa dowladda, Raxnaweyne waa dowlad, Ogaadeen waa dowlad, Hawiye waa dowlad, dhamaan Itoobiya ayay ka amar qaataan” ayuu sidoo kale yiri Xasan Daahir Aweys.
Xasan Daahir Aweys ayaa dhanka kale ka hadlay Alshabaab, wuxuuna sheegay iney sabab u noqdeen in laga cararo Jabhadaha Islaamiyiinta ah ee Soomaaliya.
“Shabaabku waxey sabab u nqodeen in la arki waayo Islaamiyiinta, waana arrin nasiib darro ah” ayuu yiri Xasan Daahir oo tilmaamay iney waayeen dhallinyaro ama beelo Itoobiya ula dagaallama Itoobiya sida sanadihii 2007 iyo 2008 ee uu jiray Isbaheysigii dib u xorreynta Soomaaliya.
Hadalka Xasan Daahir ayaa waxaa ka muuqatay inuu weli diyaar u yahay inuu dagaal kazoo wado dalka Soomaaliya, wuxuuna dhalinta uu ugu yeeray in ay kacaan, isla-markaana ay badbaadiyaan dalka iyo shacabka Somaliyeed, kana suuliyaan waxa uu ugu yeeray qabyaalada qurunka ah iyo gumeysiga.
“1-da Luulyo ayaa la rabaa in dhawaan la xuso, dalkiina gumeysi ayuu ku jiraa!” ayuu yiri Xasan Daahir Aweys.
Hadalka Xasan Daahir ayaa ahaa mid loogu talagalay xuska maalinta 15-ka May, waxaa khudbadiisa warbaahinta loo qaybiyay 20-ka May 2014.